बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नै हातको दर्शन गर्दा हुन्छ यस्ताे फाइदा ! – Dailny NpNews
बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नै हातको दर्शन गर्दा हुन्छ यस्ताे फाइदा !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २५, २०७८ समय: १०:०८:०७
मानिसहरूलाई पूर्ण विश्वास छ कि प्रार्थनाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्दछ। विहान उठेर हत्केलाको दर्शन गर्नाले हुन्छ दिन नै शुभ । हाम्रा दैनिक जीवनका पनि संस्कार छन् । दैनिक संस्कार पालना गर्न सक्यो भने जीवन सुखमय हुनसक्छ ।
शिक्षाः जब कुनै व्यक्ति कुनै समस्या वा कुनै दुविधामा पर्दछ, उसले सँधै परमेश्वरलाई सम्झन्छ र भगवानलाई प्रार्थना गर्दछ, हे परमेश्वर, कि तपाईंले उसलाई यस समस्याबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो समस्या कम गर्न कुनै तरिका देखाउन सक्नुहुन्छ।